Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Oganda » Misokatra indray i Ziwa Rhino Sanctuary eo ambanin'ny Fahefana Wildlife Uganda manampy ny fizahan-tany
Ny Oganda Wildlife Authority (UWA) sy Ziwa Rhino and Wildlife Ranches (ZRWR) dia nanokatra ny Toeram-piarovana Ziwa Rhino ho an'ny besinimaro ary nanohy ny asan'ny fizahantany tao amin'ny fitoerana masina.
Izany dia taorian'ny nifanarahan'ny ZRWR sy UWA hiara-mitantana sy manohy ny fandaharanasa fiterahana.
Izany dia nitranga taorian'ny nialan'ny Rhino Fund Uganda (RFU), ny fikambanana tsy miankina amin'ny governemanta izay nitantana ny fitoerana masina.
Ny roa tonta dia eo am-pandinihana ny fifanarahana fiaraha-miasa izay hampiroborobo ny fiompiana rhino sy ny fitantanana ny fizahantany fizahan-tany ao amin'ny toerana masina.
Araka ny fanambarana niarahan'ny mpitondra tenin'ny UWA Hangi Bashir ary nosoniavin'ny talen'ny Executive UWA, Sam Mwandha, ary ny kapiteny (ZRWR) Charles Joseph Roy, Tale mpitantana (ZRWR), dia eo am-piketrehana ny fifanarahana fiaraha-miasa ny roa tonta. izay hampiroborobo ny fiompiana rhino sy ny fitantanana ny fizahantany fizahan-tany ao amin'ny fitoerana masina.
UWA sy ZRWR dia hiara-hapetraka ny mpiasa ao amin'ny fitoerana masina miaraka amin'ny UWA izay mandray ny anjara toerana lehibe amin'ny fanaraha-maso sy ny filaminana. UWA koa dia hanohy hanome serivisy ho an'ny veterinary ao amin'ny fitoerana masina tahaka ny nitranga hatramin'ny nametrahana ny rhinozena teto amin'ny firenena.
"ZRWR dia manolo-tena hanome tany ho an'ny fitoerana masina sy ho an'ny programa fananahana ary hanome rafitra fitantanana tsara amin'ny alàlan'ny famolavolana sy fampiharana drafitra fitantanana ny fitoerana masina," hoy ny fanambarana.
Nakaton'ny UWA ny toeram-piarovana tamin'ny 20 aprily 2021, nanatanteraka ny baikony hiarovana ny harena voajanahary araka ny lalàna momba ny Wildlife Act of 2019. Ny fanidiana ny fitoerana masina dia vokatry ny fahasamihafana tsy azo ihodivirana eo amin'ny RFU sy ny fitantanana ny ZRWR, tompon'ny tany on izay nananganana ny fitoerana masina. Ireo fahasamihafana ireo dia niafara tamin'ny fanoloran'ny RFU ny UWA.
Nanamafy i UWA fa salama ara-pahasalamana 33 ankehitriny no salama ara-pahasalamana.